Lamba Fiberglass PU
Ny fifandraisana amin'ny lelafo dia tsy mirehitra, ny hafanana maharitra ampiasaina <200 ℃, miaraka amin'ny fanoherana ny fikosehana, ny rano, ny fisorohana ny afo, ny fanoherana ny alkaly ary ny asa hafa.
MITADIAVA bebe kokoa
Fandeferana amin'ny mari-pana tsara, mari-pana 24 miasa -140 ka hatramin'ny 360 Celsius. Non stick, mora esorina ny dity amin'ny suface.
Ny lanja maivana, ny hakitroky ny vy dia 1/4 fotsiny. Hery matanjaka. Malefaka miovaova. Mety ny fananganana, avo ny fahombiazan'ny fananganana.
fikatsahana kalitao tsara indrindra
Izahay dia mirotsaka amin'ny fitaovana avo lenta. Ny orinasanay dia mandray anjara amin'ny lamba volon'olom-bava vita amin'ny silipo, lamba mihosin-kazo vita amin'ny fonosana PU, lamba vera Teflon, lamba firakotra vita amin'ny foil vita amin'ny alimo, lamba fireproof, lamba firakotra, lamba vita amin'ny vera, izay ampiasaina indrindra amin'ny fanamboarana, fitaterana, elektronika, indostrian'ny simika, fiarovana ny tontolo iainana fiarovana nasionaly sy indostria hafa. Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny mpikambanay efa za-draharaha dia misy foana hiresaka momba ny zavatra takinao sy hiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Ny orinasanay dia mandray anjara amin'ny lamba vita amin'ny volomaso vita amin'ny silipo, lamba mihosin-kavina vita amin'ny pu,
Teflon vera lamba, aluminium foil mifono lamba, lamba tsy may afo, lamba firakotra lamba, lamba fibre vera.
Ny orinasantsika dia manana hery ara-teknika matanjaka, avo lenta, famatsiana ara-potoana, serivisy aorinan'ny varotra tsara,
laza ambony, ny orinasa manana "toe-tsaina maharitra, hentitra, azo antoka, manavao" ...
Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic, Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy, Lamba Fiberglass Aluminized, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass, Clot Fiberglass, Fiberglass mifono akrilika,